Ngaba uye wakha wazibuza ukuba kutheni sisebenzisa isimboli "lb" kwi " unit "? Igama elithi "ipondo" lincinci kwi "pounds weight," eyayiyi- libra pondo ngesiLatini. Inxalenye ye- libra yale binzana ibhekisele kwisisindo sokulinganisela okanye isilinganisi sokulinganisela. Ukusetyenziswa kweLatini kwancincizelwe kwi- libra , ngokuqhelekileyo yayisigxina "lb". Siye samkela i-pound inxenye ukusuka kwi- pondo , kodwa sigcinwe isicatshulwa se libra .
Kukho iinkcazelo ezahlukeneyo zobunzima beepounds, kuxhomekeke kwilizwe.
EUnited States, iyunithi yamanqindi yanamhlanje ichazwe ukuba yi-2.20462234 iipounds ngeekhilomitha nganye. Kukho ii-ounces ezili-16 kwi-1 pounds. Nangona kunjalo, kumaxesha amaRoma, i- libra (iipounds) yayingama-0.3289 kilogram kwaye yahlula yaba yi- uncia okanye i-ounces ezili-12.
EBrithani, kubekho uhlobo olungaphezu kweyodwa "yeepounds", kubandakanywa nenqaku le-aitdupois kunye ne-Troy pound. I-pound sterling yayingumyinge webhore yesilivere, kodwa umgangatho wawushintshwa waba yi-Troy pound ngo-1528. I-Imperial Standard Pound ichazwa njengokuba ubunzima obulingana ne-0.45359237 kilogram, ehambelana nencazelo yepali yamazwe ngamazwe, njengoko kuvunyelweneyo (nangona kungavunywanga yi-US) ngo-1959.
Indlela yokuncibilikisa i-Gallium Metal kwisandla sakho
I-Atomic Mass and Atomic Abundance Isibonelo Inkomathi Ingxaki
Umzekelo wokuPhambukisa oMgangatho oPhezulu
Isibonelo sokuSungula umzekelo
Kutheni Kuthiwa Iintlanzi Ezifile Zinyuka Ngaphezulu
Ukudlala njani iBhola yeBhola xa Ufutshane
21 Iingcaphuno ezingenakulibaleka 'Zonke ezithobileyo eNtshona Front'
"Umfazi WeNdlu Yenyaniso"
Izinto Ezinokuzi-5 NgoJayce Phelps
Isikhundla sikaHillary Clinton kwiNtlawulo kunye neBanga eliphakathi
Iimpawu zoMculo zehlabathi ezenziwa yiNtsapho nganye
I-Biology Prefixes kunye ne-Suffixes: -plasm, iplasmo-
2018-2019 Iimvavanyo zovavanyo lwe-LSAT
I-Master Quickstep Dance
Udliwano-ndlebe: URobert Pattinson uthetha malunga 'neTwilight' kunye 'noLwandle oluncinane'
I-Practice Drill ukuphuhlisa ukubeka i-Stroke efanelekileyo